February 2016 - Technology Khabar
Monthly Archives: १७ फाल्गुन २०७२, सोमबार १५:४३
मोबाइल एपले क्यान्सर रोक्न सहयोग गर्ने, क्यान्सरको बारेमा तत्काल जानकारी लिन सकिने
१७ फाल्गुन २०७२, सोमबार १५:४३	Comments Off on मोबाइल एपले क्यान्सर रोक्न सहयोग गर्ने, क्यान्सरको बारेमा तत्काल जानकारी लिन सकिने
काठमाडौं, १७ फागुन । क्यान्सरका बिरामीहरुको जाँचमा अब डाक्टरहरुले मोबाइल एपको प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् । यो एपमा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि पूरै सन्दर्भ सामाग्रीहरु राखिएको हुनेछ, जसमा क्यान्सरको लक्षण, चिन्ह तथा तस्वीरहरु राखिएका हुनेछन् । यो एप एप्पल तथा गूगलको एप स्टोरबाट डाक्टरहरुले निशुल्क डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । स्कट सरकारले शंकास्पद क्यान्सरको अवस्थामा स्कटिश रेफरल गाइडलाइन्स दिनका लागि यो एप ...
हुवावेको मेट एट नेपाल भित्रियो, साथमा जीआर ५ पनि, केहि वर्षमा नम्बर १ कम्पनी बन्ने दाबी
१६ फाल्गुन २०७२, आईतवार २२:१४	Comments Off on हुवावेको मेट एट नेपाल भित्रियो, साथमा जीआर ५ पनि, केहि वर्षमा नम्बर १ कम्पनी बन्ने दाबी
काठमाडौं, १६ फागुन । हुवावेको पछिल्लो फ्ल्यागशिप फोन मेट एट (Mate 8) नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ । हुवावेले आईतवार एक कार्यक्रमका बिच फ्ल्यागशिप फोन मेट एट तथा जीआर ५ (GR 5) स्मार्टफोन नेपाली बजारमा उपलब्ध भएको घोषणा गरेको हो । हुवावे मेट एट कम्पनीको बजारमा उपलब्ध भएको पछिल्लो स्मार्टफोन हो । यो स्मार्टफोन प्रिमियम सेगेमेन्टको स्मार्टफोन हो । यसअघि ...
१६ फाल्गुन २०७२, आईतवार १८:१८	Comments Off on सुन जडित सामसुंग ग्यालेक्सी एस सेभेन तथा एस सेभेन एज, विशेष फोन किन्न २ लाख ६३ हजार तिर्नुपर्ने
काठमाडौं, १६ फागुन । पछिल्लो समयको सबैभन्दा चर्चित फोन मध्येमा पर्ने सामसुंगको नयाँ फ्ल्यागशिप ग्यालेक्सी एस सेभेन (Galaxy S7) तथा एस सेभेन एज (S7 Edge) किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एकै छिन पर्खनुहोस् । यो फोन तपाईँले साधारण सेटको रुपमा खरिद गर्न चाहनुहुन्छ वा केहि विशेष किसिमले खरिद गर्न चाहनुहुन्छ ? यदि तपाईँ यो फोनलाई अझ भव्य र आकर्षकरुपमा खरिद गर्न ...
१४ फाल्गुन २०७२, शुक्रबार २३:३७	Comments Off on हुवावे मेट एट नेपालमा सार्वजनिक हुँदै, ८० हजार रुपैंयामा खरिद गर्न सकिने
काठमाडौं, १४ फागुन । हुवावेको पछिल्लो फ्ल्यागशिप फोन मेट एट (Mate 8) आगामी साता नेपालमा सार्वजनिक हुने भएको छ । हुवावेले आउँदो आईतवार एक कार्यक्रमका बिच फ्ल्यागशिप फोन मेट एट नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने घोषणा गर्न लागेको हो । कम्पनीनले मेट एट नेपालमा सार्वजनिक गर्न काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम गर्न लागेको छ । कम्पनीले मेट एट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमका लागि विभिन्न ...
स्मार्टफोन अब १५ मिनेटमा नै चार्ज हुने, विशेष प्रविधियुक्त ब्याट्री प्रयोग
१४ फाल्गुन २०७२, शुक्रबार १६:४२	Comments Off on स्मार्टफोन अब १५ मिनेटमा नै चार्ज हुने, विशेष प्रविधियुक्त ब्याट्री प्रयोग
काठमाडौं, १४ फागुन । तपाईँको फोन कति मिनेटमा चार्ज हुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर फरक फरक आउन सक्दछ । कसैले ३० मिनेट, कसैले ४५ मिनेटमा फोन चार्ज हुने अनुभव गरेका होलान् । फोन चार्ज हुन निकै समय लाग्ने हुँदा छिटो चार्ज गर्ने फास्ट चार्ज (Fast Charge) प्रविधि सँधै चर्चामा आउने गर्दछ । यहि बेला बार्सिलोनामा भईरहेको मोबाइल वल्र्ड कंग्रेस २०१६ ...
एप्पलको ‘हे सिरि’ अब म्याकमा आउँदै, थप नयाँ फीचरपनि साथै आउने
१३ फाल्गुन २०७२, बिहीबार २३:२७	Comments Off on एप्पलको ‘हे सिरि’ अब म्याकमा आउँदै, थप नयाँ फीचरपनि साथै आउने
काठमाडौं, १३ फागुन । एप्पलको पर्सनल एसिस्टेन्स ‘सिरि’ (Siri) कम्पनीका अन्य डिभाइसहरुमा कहिले आउँछ भनेर प्रतिक्षामा रहेका ग्राहकहरु लाई एप्पलले खुशी तुल्याउने भएको छ । कम्पनीले छिटै म्याक अपरेटिंग सिस्टमका लागि सिरि सार्वजनिक गर्ने भएको नाइन टू फाइभ म्याकले उल्लेख गरेको छ । एप्पलले म्याक अपरेटिंग सिस्टम एक्सका (Mac OS X) लागि सिरि उपलब्ध गराउने भएको छ । कम्पनीले यस ...
१३ फाल्गुन २०७२, बिहीबार १२:४९	Comments Off on विकासको स्तर उकास्न खाद्य सुुरक्षा आवश्यक
काठमाडौं, १३ फागुन । विश्व खाद्य कार्यक्रम नेपालले नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवधारणाका विषयमा जानकारी दिन बुधबार ‘खाद्य सुरक्षा जानकारी सत्र’ नामक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को सह–आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा विश्व खाद्य कार्यक्रम नेपालकी देशीय निर्देशक पिप्पा ब्य्राड फडले मानव विकास सूचकांकमा नेपाल १ सय ८८ राष्ट्र मध्ये १ सय ४६ औं स्थानमा रहेको र ...
१२ फाल्गुन २०७२, बुधबार २३:१९	Comments Off on जियोनिको नयाँ फ्ल्यागशीप ईलाइफ एस एट घोषणा, नयाँ लोगो र स्लोगन पनि सार्वजनिक
काठमाडौं, १२ फागुन । जियोनिले औपचारिक रुपमा आफ्नो नयाँ ब्राण्ड परिचय (Brand Logo) बार्सिलोनामा सोमबार आयोजित मोबाईल वल्र्ड कंग्रेसमा सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो ब्राण्डको नयाँ परिचयका लागि कम्पनीले आफ्नो नयाँ लोगो र नयाँ ट्यागलाइन “मेक स्माइल्स“ (Make Smiles) संचालनमा ल्याएको छ । साथै कम्पनीले आफ्नो नयाँ फ्ल्यागशीप स्मार्टफोन ईलाइफ एस एट (Elife S8) पनि सार्वजनिक गरेकोछ । एस एटमा ...
१२ फाल्गुन २०७२, बुधबार १५:४६	Comments Off on क्यास अन एड एप फेरि विश्व बजारमा आउँदै, मोबाइल एपमा विज्ञापन हेरेपछि पैसा पाईने
काठमाडौं, १२ फागुन । एफ वान सफ्टको (F One Soft) मोबाइल एप क्यास अन एड (Cash on Ad) पुन विश्व बजारमा उदाउने भएको छ । कुनै समय नेपालमा निकै चर्चित मोबाइल एप बन्न पुगेको क्यास अन एड पुनः दक्षिण पूर्वी एशिया तथा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुबाट उदाउन लागेको हो । एफवान सफ्टले क्यास अन एड मोबाइल एपलाई दक्षिण पूर्वी एशियाको मलेशिया ...